Hit the target (@aggamun) - PALnet
Hit the target (@aggamun)
Steem တှကေ လှိမျ့ လှိမျ့ ပွီးကလြို့ နပေါတယျ။ သူ့ တဈခုထဲလလား ဆိုတော့လညျး မဟုတျသေး ပွနျ ပါဘူး။ crypto အားလုံး တလိမျ့ ခေါကျကှေး ကို ဖွဈလို့ ပါ။ အားလုံး ရဲ့ ဘိုးအကွေီး btc သညျပငျ မမာနိုငျ တော့ ဘဲ ကြှနျတျော ကွညျ့မိလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဒျေါလာ ၉၀၀၀ အောကျ တောငျ ရောကျလာ ခဲ့ပါပွီ။
Crypto တှေ နောငျတခြိနျမှာ အရေးပါလာမယျလို့ ယုံကွညျ မြှျောလငျ့ ကွပမေယျ့လညျး အရငျက ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သငျခနျးစာ တှေ ကွောငျ့ crypto မြားဟာ ရုနျးကနျ နကွေရဆဲ လို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ အခွားသော စီးပှားရေး ဆိုငျရာ အခကျြအလကျ တှေ ကြှနျတျော မသိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ crypto တှေ အပျေါမှာတော့ ယုံကွညျမှုက အတျော ကွီးမားပါတယျ။
အဓိက က စတငျးဈေးတှေ ကတြာကို ပွောခငျြတာပါ။ ဈေးကတြော့ ဘာဖွဈသလဲ။ ဈေးကတြော့ စတငျးပါဝါ စုမိတာပေါ့ ခငျဗြာ။ စတငျးပါဝါ ၅၀၀ ကြျောလောကျနဲ့ ရကျပေါငျး ၃၀ မှာ ပါဝါ ၁၀၀ စုမိဖို့ ကြှနျတော့ အတှကျ မလှယျလှပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ စာရေးပွီး ပိုဈ့ တငျနရေုံလေး နဲ့တော့ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျခဲ့ မိပါတယျ။
အခုတော့ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ကြှနျတျော ဘယျလောကျ ဝမျးသာသလဲ ကြှနျတျောပဲ သိတယျ ဗြ တကယျ။ အဲဒီ အတှကျ အစစ အရာရာ ကူညီ ပေးတဲ့ ဘဒိုကွီး @mmunited ကို အထူး ကြေးဇူးတငျ နပေါတယျ။ Thank you Sir! 😃😃
ကြှနျတော့ ရဲ့ vote ပေးဖျော ပေးဖကျ မိတျဆှေ မြားကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ Thank you my friends ! 😍😍
အခုလို ခကျခဲနတေဲ့ အခြိနျကာလ မှာ တဈယောကျ နဲ့ တဈယောကျ တတျနိုငျသမြှ အပွနျအလှနျ ကူညီ ကွပါဦးလို့ ကြှနျတျော တောငျးဆိုခငျြပါတယျ။ အားလုံး ကံကောငျးကွပါစေ ဗြား။
Steem တွေက လှိမ့် လှိမ့် ပြီးကျလို့ နေပါတယ်။ သူ့ တစ်ခုထဲလလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေး ပြန် ပါဘူး။ crypto အားလုံး တလိမ့် ခေါက်ကွေး ကို ဖြစ်လို့ ပါ။ အားလုံး ရဲ့ ဘိုးအေကြီး btc သည်ပင် မမာနိုင် တော့ ဘဲ ကျွန်တော် ကြည့်မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၉၀၀၀ အောက် တောင် ရောက်လာ ခဲ့ပါပြီ။
Crypto တွေ နောင်တချိန်မှာ အရေးပါလာမယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့် ကြပေမယ့်လည်း အရင်က ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သင်ခန်းစာ တွေ ကြောင့် crypto များဟာ ရုန်းကန် နေကြရဆဲ လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ အခြားသော စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက် တွေ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် crypto တွေ အပေါ်မှာတော့ ယုံကြည်မှုက အတော် ကြီးမားပါတယ်။
အဓိက က စတင်းဈေးတွေ ကျတာကို ပြောချင်တာပါ။ ဈေးကျတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ ဈေးကျတော့ စတင်းပါဝါ စုမိတာပေါ့ ခင်ဗျာ။ စတင်းပါဝါ ၅၀၀ ကျော်လောက်နဲ့ ရက်ပေါင်း ၃၀ မှာ ပါဝါ ၁၀၀ စုမိဖို့ ကျွန်တော့ အတွက် မလွယ်လှပါဘူး။ အထူးသဖြင့် စာရေးပြီး ပိုစ့် တင်နေရုံလေး နဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ မိပါတယ်။
အခုတော့ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ဝမ်းသာသလဲ ကျွန်တော်ပဲ သိတယ် ဗျ တကယ်။ အဲဒီ အတွက် အစစ အရာရာ ကူညီ ပေးတဲ့ ဘဒိုကြီး @mmunited ကို အထူး ကျေးဇူးတင် နေပါတယ်။ Thank you Sir! 😃😃
ကျွန်တော့ ရဲ့ vote ပေးဖော် ပေးဖက် မိတ်ဆွေ များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you my friends ! 😍😍
အခုလို ခက်ခဲနေတဲ့ အချိန်ကာလ မှာ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် တတ်နိုင်သမျှ အပြန်အလှန် ကူညီ ကြပါဦးလို့ ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ အားလုံး ကံကောင်းကြပါစေ ဗျား။
esteem esteem-myanmar palnet steemleo
Fighting you too !! Bro. 💪💪💪